Miara-miasa amin'ny Registrar Domain na Reseller ve ianao? | Martech Zone
Wednesday, May 13, 2015 Alakamisy, May 14, 2015 Douglas Karr
Konsepan'ny mpandraharaha matahotra ny lehibeny
Koa satria miara-miasa amin'ny mpampiasa vola be izahay, indraindray dia mangataka anay izy ireo hanao zavatra sasany ivelan'ny fenitra ho an'ny masoivoho iray. Mpamatsy vola iray izay miara-miasa aminay no manakarama anay matetika hifehezana ny fividianan'izy ireo. Mety tsara ny fananana orinasa vonjimaika hitantanana ireo fizotrany ireo satria matetika dia kely ny fifampiraharahana sy vola be eo anelanelan'ny antoko.
Ny dingana dia somary mahitsy. Mampiasa kaonty escrow an'ny antoko fahatelo izahay izay manamarina fa nametraka ny vola ho an'ny ankolafy hafa izahay ary avy eo manome alalana ny famotsorana ireo vola izahay rehefa mahazo tompon'ny anaran'ny sehatra. Raha misy karazana tsy fitovian-kevitra mitranga, ny fifanarahana dia hiditra amin'ny fanelanelanana. Mampijanona ny fifampiraharahana amin'ny orinasa tsy mitandrina izany.
Herinandro vitsivitsy lasa izay, nifampiraharaha tamin'ny fividianana sehatra avy amin'ny antoko tsy miankina izahay. Voasoratra anarana ny domain Yahoo! Orinasa kely… Sa nieritreritra izahay.
Napetrakay tao anaty escrow ilay vola ary nanomboka ny fahafinaretana. Nanampy ny ankolafy hafa izahay hamaha ny fonenana ary manome alalana ny famindrana ny sehatra ho an'ny mpiraki-draharahan'ny mpanjifanay. Ity dia dingana somary tsotra raha fantatrao izay ataonao, mila fotoana fotsiny izany miankina amin'ny registrar domain.
Nijery ny kaontin'ny domaine an'ny mpanjifa sy ny antoko tsy miankina aho ny ampitso maraina ary tsy nisy niova. Ny ampitso dia nanamarina indray aho ary ny famindrana dia nofoanana ny. Niantso ny antoko tsy miankina aho ary nilaza izy fa tsy nanao na inona na inona.
Nanangana antso kaonferansa aho ary niantso ny ekipa mpanohana an'i Yahoo izahay. Rehefa avy niandry fotoana elaela izahay dia nihaona tamina teknolojia mpanohana izay nilaza fa tsy afaka mamindra ilay sehatra ivelany izahay, fa raha manana Yahoo! Kaonty Business Small, azontsika atao ny mamindra ny kaonty amin'ny kaonty.
Raha nividy domains ianao… mety ho vao mainka tezitra amin'izany ny sofinao. Taorian'ny taonan'ny fifanolanana famindrana sehatra, ICANN namehy ity fomba ity mba hahazoana antoka fa afaka mamindra domains mora ianao avy amin'ny registrar iray mankany amin'ny iray hafa. Natao izany mba hiantohana ireo orinasa fisoratana anarana amin'ny sehatra tsy afaka mitazona ny mpanjifany takalon'aina.
Io no fanontaniana napetrako tao amin'ny Yahoo! solontena mpanohana fa toa tsy azony ny anton'ilay fanontaniana ka dia nandeha foana izahay. Ity no manomboka manomboka mampatahotra.
Nisoratako anarana Yahoo! Kaonty Business Small ho an'ny mpanjifako mandritra ny telefaona miaraka amin'ny antoko fahatelo sy ny Yahoo! solontena. Avy eo ny solontena dia nilaza tamin'ny antoko fahatelo hanafoana ny kaontiny mba hahafahana manafaka ilay sehatra ary ho ahy dia misoratra anarana avy hatrany ilay sehatra haka izany.
Inona?! Ka hametraka an'ity tsanganana ity eny an-tsena mandritra ny minitra vitsy isika ary hanoratra izany indray ?! Ahoana raha very ny sehatra tamin'io fotoana io ho an'ny domainer maranitra any ivelany miaraka amin'ny fizotry ny fividianana mandeha ho azy ?! (Tsy fantatro raha tena nisy izany, saingy tsy nino ny fangatahana aho). Nametra-panontaniana tamin'ny solontena aho ary nanome toky ahy izy fa hanana fifehezana ny sehatra.
Noho izany dia nosintominay ilay izy ary nosoratako tao amin'ny vaovao vaovao an'ny mpanjifako Yahoo! Kaonty orinasa kely.
Andro iray taty aoriana, ary ny kaody dia mbola tao amin'ny kaontin'ny antoko fahatelo ary niseho tamiko fa tsy nafindra tanteraka. Tamin'ity fotoana ity dia nanao fikarohana aho ary Fikarohana WHOIS hahita ny fampahalalana ampahibemaso mifandraika amin'ilay sehatra. Azo antoka, nilaza izy fa mbola voasoratra anarana amin'ny antoko fahatelo ny sehatra. Saingy ity no ampahany hafahafa… tsy ny Yahoo! Orinasa madinidinika, izany Melbourne IT any Aostralia.
Nametraka tapakila ao amin'ny IT IT aho ary nanoratra izy ireo indray andro taty aoriana fa izy ireo no tena registrar ary Yahoo! Ny Orinasa madinidinika dia mpivarotra ihany. Arghhhhhh! Very maina izany fotoana rehetra izany.
Noho izany, nanomboka ny fizotran'ny famindrana sehatra tao Melbourne IT izahay. Fohy ny tantara, izy ireo koa dia manana rafitra mifangaro izay tsy ahafahanao mamindra sehatra iray amin'ny kaonty iray mankany amin'ny iray hafa. Afindrao amin'ny olona iray fotsiny ny tompon'ny kaonty. Nanao izany aho ary nandoa sarany hafa (tsy fantatro izay naloako tao amin'ny Yahoo! Small Business).
Eto izahay roa herinandro aty aoriana ary mino aho fa nafindra tamin'ny farany ny sehatra. Ny fanamarihako farany dia nilaza fa maharitra 7 andro vao vita izany dia mirary soa ho antsika!
Ny fehiny eto dia ny tokony hijerenao ny toerana fisoratanao ny domainanao. Ny fizotrany, ny tsy fisian'ny antontan-taratasy, ny fanohanana tsy fahalalana ary na ny dingana izay inoako fa nandika ny lalàna mifehy ny ICANN, dia nahasosotra sy nampihomehy. Tsy manana ahiahy aho fa mety ho mora kokoa ny fizotrany raha toa ka voasoratra anarana amin'ny fisoratana anarana ny sehatra fa tsy mpivarotra indray.
Tsara kokoa, mifikitra amin'ny GoDaddy fotsiny. Tsy hialana amin'ireo olana ireo fotsiny ianao fa handany vola kely ihany koa ary hahazo serivisy ho an'ny mpanjifa.
Tags: mividy anarana domainmividy anaran-tsehatrapetrabola escrowmelbourne itmelbourne it domainseraseraregistrar domain yahooyahoo domain
Ny zavatra niainan'ny mpanjifa tsy nahomby dia manimba ny varotrao
May 14, 2015 amin'ny 7: 54 AM
Vao nanomboka tetikasa iray aho izay hanosihako mpanjifa mahay miala amin'ny orinasa kely Yahoo mankany Godaddy, fotoana tena mety. Ny fanontaniako dia tokony hiala fotsiny ve aho amin'ny fiezahana hamaky orinasa kely Yahoo ary hiresaka amin'i Melbourne IT? Ary koa, raha heverinao fa mandeha tsara ny rehetra, dia toa ho voafehinao tanteraka ve ny sehatra misy an'i Melbourne IT ivelan'ny sary? Manontany tena fotsiny isika raha tokony havelantsika fotsiny ilay domba voasoratra ao, fa tsy hanao risika sy fotoana hafa.
May 15, 2015 amin'ny 12: 53 AM
Salama Jon, raha ny marina dia nahatsiravina tokoa ny traikefa (ary ny interface Domain's Melbourne dia tsy mandeha ao amin'ny Chrome akory), any ivelan'ny toerana aho. Ny sehatra dia nafindra (niampita ny rantsan-tànana) dieny izao.
May 17, 2015 ao amin'ny 4: 52 PM
Misaotra ny valiny Doug! Manantena ny fanavaozana izany aho. Ny mpanjifa iray hafa ihany no nifandraisako tamin'ny alalàn'izy ireo ary nisafidy ny hitazona azy ireo aho noho io fahasahiranana io. Farafaharatsiny farafaharatsiny mba antenaiko fa hahita ity lahatsoratra bilaogy ity ny olona ary hisafidy ny tsy hanomboka ny fototr'izy ireo amin'ny alàlan'ny orinasa kely Yahoo. Mino mafy aho amin'ny fanomezana ny tompona orinasa tsirairay hahay hifehy ny fananany manokana. Imbetsaka ny olona no tsy mahatsapa akory ny teknikan'ny fidirana an-tsehatra amin'ny orinasa iray izay manao izay tokony ho fampiasam-bola, fatiantoka, rehefa misafidy ny hitady orinasa hafa.
2 Feb 2016 tamin'ny 3:59 maraina
Raha ny ahy dia tiako ity Iza Bebe kokoa